IiNkonzo ze-Intanethi - Ziziphi iicawa ezidibeneyo ngokubambisana?
Ukulandela isicwangciso sombutho esitholakala kwiTestamente Entsha, iicawa zikaKristu zizimela. Ukholo lwabo oluqhelekileyo eBhayibhileni kunye nokunamathela kwiimfundiso zalo yizibophelelo ezinkulu ezibopha ndawonye. Ayikho ikomkhulu eliphambili lecawa, kwaye akukho nhlangano ephakamileyo kubadala bebandla ngalinye lendawo. Amabandla asebenzisana ngokuzithandela ekusekeleni izintandane kunye nabantu abadala, ekushumayeleni ivangeli kwiindawo ezintsha, nakweminye imisebenzi efanayo.
Amalungu ebandla likaKristu aqhuba iikholeji ezingamashumi amane nezikolo zasesekondari, kunye neenkedama ezingamashumi asixhenxe anesithoba kunye nemizi yabantu abadala. Kukho amaphephancwadi e-40 kunye namanye amaphepha apapashwa ngamalungu ngamnye ebandla. Inkqubo yomnxeba kunye nomabonakude welizwe lonke, eyaziwa ngokuba yi "Herald of Truth" ixhaswa yiChurch Highland Avenue eAbilene, eTexas. Uninzi lwabiwo-mali lwangonyaka we-$ 1,200,000 lunegalelo kwisiseko sokuzikhethela ngamanye amabandla kaKristu. Iprogram yomsasazo ngoku ivalelwe ngaphezu kwezitishi zerediyo ze-800, ngeli xesha iprogram yethelevishini ngoku ivela kwiivenkile ze-150. Enye inzululwazi eninzi eyaziwa ngokuba yi "World Radio" inomnatha wezakhiwo ze-28 eBrazil kuphela, kwaye isebenza ngokuphumelelayo eUnited States nakwamanye amazwe angaphandle, kwaye iveliswa kwiilwimi ze-14. Inkqubo enkulu yokupapasha kumaphephancwadi kazwelonke aqala ngoNovemba 1955.
Ayikho iindibano, iintlanganiso zonyaka, okanye iimpapasho ezisemthethweni. "Intambo ebophayo" kukunyaniseka okuqhelekileyo kwimigaqo yokubuyiselwa kobuKristu beTestamente eNtsha.